Fandinihan-tena ara-pananahana amin'ny lehilahy - Ny fiantohana valisoa
Home Fanandramana mahomby amin'ny lehilahy
Manana olana amin'ny pôrnôgrafia ve ianao na olona akaiky anao? Ity fizarana ity dia manolotra fitsapam-pahaizana tsotra momba ny firaisana. Izany dia afaka manampy ny olona hamantatra raha mety ho voka-pifanakalozan-kevitr'ireo olana ara-pahasalamana mety ho azony ny pôrnôn'ny aterineto.
Ny fanandraman'ny lehilahy
Ity dia fanandramana tsotra ataon'ity lehilahy ity raha te hahita raha misy pseudo dia mifandray amin'ny olana ara-pananahana. Noforonin'i Gary Wilson mba hanampy ny olona hahalala raha misy ifandraisany amin'ny fampiasana sary vetaveta ny sary vetaveta amin'ny sary vetaveta na tsirony fa tsy ny tebiteby.
1. Voalohany, jereo ny urologist tsara ary manapaka ny tsy fahampiana ara-pahasalamana.
2. Manaraka izany, indray mandeha, miorim-paka amin'ny pôrnôgrafia tianao (na alao sary an-tsaina fotsiny hoe nanao ahoana raha nianiana izany ianao).
3. Avy eo, amin'ny fotoana iray hafa dia tsy mijery pôrnôgrafia ary tsy manadino momba ny pôrnôgrafia.
Ampitahao ny kalitaon'ny fananganana anao sy ny fotoana nialany tamin'ny fara-tampony (raha afaka miakatra ianao). Ny zatovolahy salama dia tsy tokony hanana olana noho ny fananganana fanorenana feno sy masturbating amin'ny orgasme tsy misy pôrnônia na sary vetaveta.
Raha manana fananganana matanjaka ao amin'ny #2 ianao, fa ny dysfunction erectile ao amin'ny #3, dia mety ho voan'ny Dizitety Erectile Erectile Porn ianao (PIED) ianao. Mila mijanona amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet ianao. Ny valin'ny Fanamarinana dingana telo nohavaozina is recommended.
Raha matanjaka sy matanjaka i #3, nefa manana olana amin'ny tena mpiara-miasa ianao, dia mety hanahy ny ED ianao.
Raha manana olana ianao eo amin'ny #2 sy #3, dia mety ho voan'ny Porn-induced ED ianao na ny olana ambanin'ny etsy ambany, izay mila fanampiana ara-pitsaboana.